Giovanni Ribisi – Stars – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Gangster Squad (2013) Unicode ဒုတိယကမ်ဘာစဈပွီးတော့ အမရေီကနျဟာ ကိုရီးယားပွညျတှငျးစဈကို ဝငျပါတယျ ၊ နောကျကြူးဘားအရေးကွောငျ့ ရုရှားနဲ့ စဈဖွဈမလိုလိုအထိ ဖွဈခဲ့တယျ ။ ပွညျပအရေးတှေ ဝငျရောကျစှကျဖကျတာမြားလာတယျ ပွီးတော့ ကမ်ဘာစဈဒဏျကိုလညျး တျောတျောထိထားတော့ မိမိ ပွညျတှငျးအုပျခြုပျရေးဘကျကို ကောငျးကောငျးမလှညျ့ကွညျ့နိုငျတော့ဘူး ။ အဲသလိုတှေ ပွညျတှငျး အုပျခြုပျရေးဘကျ ပေါ့လြော့ခဲ့လို့ အမရေီကနျပွညျသူတှဟော လူဆိုးဂိုဏျးတှရေဲ့ ဒုက်ခပေးခွငျးကို တျောတျောခံခဲ့ရတယျ ။ ဂြှနျဒီလငျဂြာလို ပွညျ့သူရနျသူ နံပါတျ-၁ လို့ ကွငွောရတဲ့အထိ လူဆိုးတှေ ပျေါထှကျလာတယျ ။ ဒီရုပျရှငျက ၁၉၄၉ ခုနှဈ အမရေီကနျရဲဌာနတှေ ၊ တရားရေးဌာနတှေ အကငျြ့ပကျြခွစားပွီး မကောငျးမှုပွုရာတှကေို အခွခေံပွီး ရိုကျကူးထားတယျ ။လော့အိနျဂလြိဈမွို့မှာ လောငျးကစားရုံ ၊ ပွညျ့တနျဆာအိမျ ၊ မူးယဈဆေးအရောငျးအဝယျစသဖွငျ့ မကောငျးမှုမှနျသမြှအကုနျလုံး ထိနျးခြုပျ လုပျကိုငျနတေဲ့ ဂိုဏျးစတား တဈယောကျရှိတယျ ။ သူက အရငျတုနျးက လကျဝှလေ့ောက က လူ ၊ ...
IMDB: 6.7/10 199943 votes
Public Enemies (2009) Unicode Public Enemies (2009) ဇာတျကားဟာ 1993 ခုနှဈက နာမညျကြျော ဘဏျဓားပွတဈဦးဖွဈတဲ့John Dillinger အကွောငျးကို ဖွဈရပျမှနျရိုကျကူးထားတဲ့ ဇာတျကားတဈကားပဲဖွဈပါတယျ။မငျးသားကွီး Johnny Depp အဓိကပါဝငျရိုကျကူးထားပွီးစိတျဝငျစားဖှယျကောငျးသော အကျရှငျ Crime ရုပျရှငျအမြိုးအစားဖွဈပွီး IMDB rating 7.0 ရရှိထားသော ရုပျရှငျကားတဈကားဖွဈပါတယျ။ Credit Review Zawgyi Public Enemies (2009) ဇာတ်ကားဟာ 1993 ခုနှစ်က နာမည်ကျော် ဘဏ်ဓားပြတစ်ဦးဖြစ်တဲ့John Dillinger အကြောင်းကို ဖြစ်ရပ်မှန်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားကြီး Johnny Depp အဓိကပါဝင်ရိုက်ကူးထားပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော အက်ရှင် Crime ရုပ်ရှင်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး IMDB rating 7.0 ရရှိထားသော ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ Credit Review
IMDB: 7.0/10 267464 votes
Saving Private Ryan (1998) ဒီကားလေးက ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကို အခြေပြုပြီးရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ရဲ့အလှည့်အပြောင်းဖြစ်တဲ့ Normandy ကမ်းခြေ တိုက်ပွဲကို အခြေပြုရိုက်ကူးထားပြီး Normandy ကမ်းခြေကို အမေရိကန်စစ်တပ်တွေ ၀င်သိမ်းတဲ့ ရိုက်ကွက်ကိုလည်း ပီပီပြင်ပြင် ရှုစားရမှာဖြစ် တယ်။ နာမည်ကြီးမင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ Tom Hanks, Matt Damon, Vin Diesel တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ချက်၊ ဇာတ်လမ်း ပြောစရာမရှိသလို ဒါရိုက်တာကလည်း နာမည်ကြီး Steven Spielbergဖြစ်လို့ ပြောစရာမလိုပါဘူး။အော်စကာဆု (၅) ခု ကို ဆွတ်ခူးနိူင်ခဲ့သလို တစ်ခြားဆုပေါင်း ၇၀ကျော်ကိုလဲ ရယူနိူင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကားအကြောင်းတော်တော်များများကြားဖူး သိဖူးနေလို့ထွေထွေထူးတော့မညွှန်းတော့ပါဘူး။ Credit Review
IMDB: 8.6/10 1,116,296 votes
Avatar (2009) Titanic ဒါရိုက်တာကြီး James Cameron ရိုက်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်သမိုင်းရဲ့ မှတ်တိုင်ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ… (စာတန်းထိုးကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲ ကိုးကားဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ရာ လိုအပ်ချက်များရှိခဲ့ပါက ကျွန်တော့်ရဲ့ အားနည်းချက်သာဖြစ်ကြောင်းကြိုတင်ဝန်ခံထားချင်ပါတယ်…)Avatar က ၁၆၃ မိနစ် (၂ နာရီနဲ့ ၄၃ မိနစ်) ကြာတဲ့ဇာတ်ကား။ နည်းနည်းလေး ပျင်းဖို့ကောင်းအောင်ကြည့်ရတာကလွဲလို့ ကြည့်ရှုသူတွေကို ဖမ်းစားထားနိုင် လောက်အောင် ဒါရိုက်တာက လက်စွမ်းပြထားပါတယ်။ဇာတ်ကားက မင်းသားမင်းသမီးတွေကလည်း ထိပ်တန်းတွေလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါရိုက်တာကသာ တိုက်တန်းနစ်ဇာတ်ကားနဲ့ အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆုရတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သူကဘုရင်လို့ ကြွေးကြော်ခဲ့ဖူးတဲ့အထိ နာမည်ကြီးတဲ့သူပါ။ ဇာတ်ကားကတော့ ဇာတ်ကျောရိုး ရိုးပေမယ့် မြင်ကွင်းတွေက နေ့စဉ်ဘ၀မှာ မတွေးမိတဲ့ နေရာတစ်ခုကို ခေါ်သွားတာကတော့ အသေအချာပါပဲ။ ကမ္ဘာမဟုတ်တဲ့နောက်တစ်နေရာပေါ့လေ။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ လူတွေနေတဲ့ကမ္ဘာအပြင်ဘက်ကပင်ဒိုရာလို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာ လူထက်နှစ်ဆကျော်လောက်မြင့်တဲ့မျက်နှာအပြာရောင်၊ နှာခေါင်းပြားပြား၊ မျက်လုံးပြူးပြူး၊ အမြီးပါတဲ့ နာဗီလို့ခေါ်တဲ့လူနဲ့တူတဲ့ဂြိုလ်သားခေါ်မလား၊ တခြားကမ္ဘာကသက်ရှိတွေလို့ခေါ်မလား သူတို့နေကြတယ်။သူတို့တွေမှာ သီးခြားဘာသာ စကားရှိပေမယ့် ရုပ်ရှင်ရိုက်လို့ကောင်းအောင်တချို့တွေကိုတော့ အင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်အောင် ဒါရိုက်တာက ခိုင်းထားတယ်။နာဗီတွေနေတဲ့နေရာက သိပ်လှတယ်။ ...
IMDB: 7.8/10 1,038,709 votes
Super Hero 48
M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website © 2020 All rights reserved ©2018 All rights reserved Disclaimer: Cinema.msubmovie.com is not in anyway associated with Gostream.is, Onlinemovies, Fmovies, Xmovies8, Putlocker sites. We do not host any videos on Cinema.msubmovie.com itself. Cinema.msubmovie.com is absolutely legal and contains only links to other third party websites like Youtube, Uptobox, Mediafire, Google, Picasaweb, Dailymotion, Openload, VK.com and many more which actually host videos. Cinema.msubmovie.com is not responsible for the compliance, copyright, legality, decency, or any other aspect of the content of other linked sites. If you have any legal issues please contact the appropriate media file owners or linked hosting websites. Cinema.msubmovie.com only and only provides links to third party video hosting sites which videos are uploaded by third party users. Cinema.msubmovie.com in no way affiliated with them nor intend to do that.